မြေကြီးက ရယ်လိမ့်မယ် (ဂျိုဇော်) — Steemit
မြေကြီးက ရယ်လိမ့်မယ် (ဂျိုဇော်)
xinmee (40)in #artzone •3years ago
သည်လို အိပ်မက်မျိုး မမက်သည်မှာ ကြာပြီ။ နံနက် အိပ်ရာမှ ထတော့ ကိုအုန်းဌေး မျက်နာသည် ကလေးတွေ ပါးစပ်ထဲက ပြုတ်ကျသည့် ဂျယ်လီတုံးကြီးလို ပြောင်ချိုချိုကြီး ဖြစ်နေ၏။ အယူသီးသည် ပြောချင်လည်း ပြောကြ ပါစေတော့။ အိပ်မက်များ၏ နိမိတ်ကို ယုံစားသည့် နေရာမှာ ကောသလမင်းကြီး ထက်ပင် ကိုအုန်းဌေးက သာလိမ့်မည်။ သူ အတိတ်နိမိတ် ယူသည့် အိပ်မက်တိတ္ထုံ ကလည်း များများစားစား မဟုတ်။ နှစ်မျိုးသာ ရှိလေသည်။
ပထမ အမျိုးအစားသည် အကောင်းဘက်ကို နိမိတ်ပြသည့် အိပ်မက်မျိုး ဖြစ်၏။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး မိုးပေါ်သို့ ပျံတက် ရသည်ဟု အိပ်မက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ တစ်ခါတလေ မြေကြီးမှ တစ်တောင်၊ နှစ်တောင် မြောက်တက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်လံ နှစ်လံအထိ မြောက်တက်သည်။ ရှားရှားပါးပါး သစ်ပင်ထိပ်ဖျား အိမ်ခေါင်မိုးစွန်းများ အထိလည်း ကြွတက်ဖူးသည်။ ထိုသို့ ကြွတက်ရာတွင် အမြင့်ခုန်သမားများလို မြေကြီးကို အားကုန်ဆောင့်ကန်၍ တက်ရခြင်းမျိုး မဟုတ်။ ပျံများလို ပေါက်ကွဲအားဖြင့် ဝုန်းခနဲ တက်သွားခြင်းမဟုတ်။ သာသာဖွဖွ ခုန်သယောင်ယောင် ပြလိုက်သည်နှင့် ညင်သာရိပ်ရိပ်ကလေး ပြေးတက်သွားခြင်း ဖြစ်၏။ တရုတ်သိုင်းကားထဲမှ ကိုယ်ဖော့ သိုင်းပညာရှင်နှင့် ဆင်ဆင်တူလေသည်။ သည်လို အိပ်မက်မျိုး မက်ပြီဘိုလျှင် သူ့အတွက် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ တစ်ခု မောင်းမတီးဘဲ ရောက်လာတော့မည်ကို အတွေ့အကြုံအရ သိနေပြီ။ မြေကြီးမှ အနည်းငယ် ကြွတက်တုန်းက စက်ဘီးအသစ် အဝတ်အစား အသစ်တွေ ရဖူးသည်။ သစ်ပင် ထိပ်ဖျားအထိ ကြွတက်တော့ မကြိုးစားပါဘဲ တစ်နှစ်တည်းဖြင့် ဆယ်တန်း အောင်ခဲ့သည်။ မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှာ စာရေးကလေးရာထူးကို လျှောက်ထားသူ အများကြီး ကြားထဲမှ အရွေးခံခဲ့ရသည်။
အကောင်းဆုံး အိပ်မက်ကတော့ ထိုသို့ ကြွတက်ရုံမျှမက ငှက်များလို သို့မဟုတ် စူပါမင်းလို သွားချင်သည့် နေရာကို ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် ပျံသန်းရခြင်း ဖြစ်၏။ ရှားရှားပါးပါး သည်လို အိပ်မက်မျိုး တစ်သက်မှာ နှစ်ခါသာ မက်ဖူးခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခါ မက်တော့ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားမှ ငါးရံ့ကိုယ်လုံး ပိုင်ရှင် ကျောင်းဆရာမလေးနှင့် လက်ထပ်ခွင့် ရခဲ့သည်။ နှစ်တွေ အတန်ကြာ အနှီ ယဉ်တစ်ကိုယ်မယ်ကလေးသည် မျက်မှန်ထူထူ၊ ဗိုက်စူစူနှင့် ငါးဖန်းမကြီး ဖြစ်လာမှ ဒုတိယမ္ပိ မက်ခွင့်ရသည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အပြိုင်အဆိုင်တွေ ကြားထဲမှ ကန်တော့ပွဲ မထိုးသည့် သူ့ကို လက်ထောက် ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ခံရသည်။ ရုံးလောကမှာ လက်/ကြီး ကိုအုန်းဌေးဟု နာမည်တစ်လုံး ရခဲ့သည်။
ဒုတိယ အမျိုးအစား အဆိုးဘက်ကို နိမိတ်ပြသည့် အိပ်မက်ကတော့ စီးနေသည့် ဖိနပ်ပျောက်ခြင်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်၏။ အပြင်ထွက်မည်၊ ရုံးသွားမည် ပြင်တော့ ဖိနပ် ရှာမတွေ့ခြင်းမျိုး၊ ဧည့်ခံပွဲ သို့မဟုတ် အခမ်းအနား တစ်ခုမှ ပြန်မည်လုပ်တော့ ဖိနပ် ပျောက်သွားခြင်းမျိုး မက်ခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုသို့မက်လျှင် မိသားစုကိစ္စ ဖြစ်စေ၊ ရုံးကိစ္စ ဖြစ်စေ၊ ဦးနှောက်ခြောက်၊ ခေါင်းခဲစရာ ပြဿနာ တစ်ခုခု တွေ့ကြရစမြဲ ဖြစ်၏။
ဖိနပ်ပျောက်၍ သိလိုက်သည့် အချိန် ရှာနေဆဲ အချိန်မှာ အိပ်မက်မှ နိုးသွားလျှင် သို့မဟုတ် အိပ်မက် ပြောင်းသွားလျှင် တော်သေးသည်။ ဆက်မက်နေပြီး ဖိနပ်မပါ ခြေဗလာဖြင့် လျှောက်သွား နေရသည်ဟု မက်လျှင် နိမိတ်က ပိုပြီးဆိုးသည်။ ကိုအုန်းဌေး အတွေ့အကြုံ အရ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား တွေ့ကြုံရစမြဲ ဖြစ်၏။ အဆိုးဆုံးမှာ ထိုခြေဗလာဖြင့် လျှောက်သွား နေရသည့် မြေပြင်သည် ရွှံ့ဗွက်များ၊ ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်များနှင့် ပြည့်နှက်နေပြီး လွတ်အောင် သိုင်းကွက် နင်းနေသည့် ကြားထဲက နင်းမိပြုမိ၊ ညစ်ပတ်ပေရေ သွားသည်ဟု မက်ရခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုသို့မက်လျှင် အဆိုးဆုံးများနှင့် တွေ့ကြုံရတတ် လေတော့၏။
ထိုသို့ မက်ပြီး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မိခင် မုဆိုးမကြီး ဆုံးပါး သွားခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခါ မက်တော့ ဇနီးသည်၏ ဝမ်းဗိုက်မှာ အကျိတ်အဖု တွေ့၍ ဆေးရုံတက် ခွဲစိတ်ခဲ့ရသည်။ စုဆောင်း ထားသည်လေး ပြောင်လုနီးပါး ဖြစ်သွားသော်လည်း ကင်ဆာ အမျိုးအစား မဟုတ်၍ တော်သေးဟု ဖြေသိမ့်ခဲ့ရသည်။
သို့ကလို မိုးပေါ် ခုန်တက်လိုက်၊ ဖိနပ် ပျောက်လိုက်နှင့် အိပ်မက်များနှင့် ကခုန်ခဲ့ရာဝယ် ဖိနပ်ပျောက်ပြီး ခြေဗလာဖြင့် သွားလာနေရသည့် အိပ်မက်တွေက အဆမတန် များနေသည် ကိုတော့ ကိုအုန်းဌေး ဝန်ခံပါသည်။ ပြီးတော့ သည်လို အိပ်မက်တွေက တမင် ဖန်တီးလို့ ရသည်မျိုး မဟုတ်။ အိပ်ရာဝင် ဘယ်လောက်ပဲ စဉ်းစား စဉ်းစား၊ ဘယ်လောက်ပဲ တွေးတွေး မက်ချင်မှ မက်သည်။ Autosuggestion ခေါ် နှပ်ကြောင်းပေးလို့ မရ။ မတွေးတော စဉ်းစားဘဲ လတွေ နှစ်တွေကြာမှ ထမက်ချင် မက်တတ်သည်မျိုး မို့လည်း ကိုအုန်းဌေး သည်လောက် အယူသီးနေခြင်း ဖြစ်၏။
မနေ့ညက အိပ်မက်ကတော့ တော်တော့်ကို ကောင်းသည်။ အိပ်မက်ထဲမှာ သားအငယ် သုံးတန်း ကျောင်းသားသည် စက္ကူစွန် လွှတ်နေရာမှ တစ်ခါတွင် စက္ကူစွန်သည် ခြံထောင့်ရှိ ဝါးရုံပင် ထိပ်ဖျားမှာ သွားတင်နေ၏။ ကျလာအောင် ခဲဖြင့် ထုချ နေသော်လည်း ကလေးအားဖြင့် ရောက်အောင် မပစ်နိုင်။ “ဖေကြီး ခဲနဲ့ ပစ်ပေး” ဟု သူ့ကို လာအပူကပ်သည်။ ကိုအုန်းဌေး လိုက်ကြည့်တော့ စွန်က ဝါးရုံထိပ်ဖျား အတောင်နှစ်ဆယ် အမြင့်လောက်မှာ တင်နေသည်။
ကိုအုန်းဌေးက စွန်နှင့် တည့်တည့် နေရာမှာ ခြေစုံရပ်လိုက်၏။ စွန်ကို မျက်တောင် မခတ်စတမ်း စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့ ဆန့်တန်းထားပြီး ခြေနှစ်ဖက်ကို စုံကြွတယ်ဆိုရုံ ခုန်လိုက်ရာ ငြိမ့်ခနဲ မြောက်တက်သွား၏။ အရှိန် တစ်သမတ်တည်းဖြင့် စက္ကူစွန်ရှိရာ မြောက်တက်သွား၊ စွန်ကို လက်ဖြင့် အသာဖြုတ်ယူ၊ မြေပြင်သို့ ဖြည်းဖြည်း ညင်သာ ပြန်ကျလာခဲ့၏။
စွန်ကို သားတော်မောင်အား ကမ်းပေးလိုက်တော့ သည်ကောင် ချက်ချင်း မယူနိုင်။ သူ့ကို မျက်လုံး အပြူးသားဖြင့် ကြည့်နေ၏။ အတန်ကြာမှ “ဒါမှ တို့ဖေဖေကြီးကွ၊ စူပါမင်းကွ” ဟု လက်ခုပ်လက်ဝါး တီးပြီး အံ့ဩဘနန်း ချီးမွမ်းလေတော့၏။ ထိုအချိန် မှာပဲ အိပ်မက်က လန့်နိုးသည်။
ခါတိုင်း သည်လို အိပ်မက်မျိုး မက်လျှင် သူ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်ဖြစ် နေရ၏။ ဘယ်သူမျှ သူ့ အစွမ်းအစကို မျက်ဝါးထင်ထင် မတွေ့မြင်ခဲ့ကြ။ ချီးမွမ်း မခံခဲ့ရ။ သည်တစ်ခါတော့ သားတော်မောင်၏ ရှေ့မှာ အစွမ်းပြခွင့် ရခဲ့သည်။ အခြားသူ တစ်ယောက်၏ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းခံရပြီ။
မနက် အိပ်ရာအထမှာ ကိုအုန်းဌေးမျက်နှာ ပြောင်ချိုချိုကြီး ဖြစ်နေပါ၏။
“မိန်းမရေ ... ညက”
“ရှင်နော် ရှင်။ မျက်နှာက ဘာဖြစ်နေတာတုံး၊ ပြောင်စပ်စပ်နဲ့”
နံနက် လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှာ ညက အိပ်မက်အကြောင်း ပြောဖို့ စကားစကာ ရှိသေး။ အိမ်ရှင်မက ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့် စကားဖြတ်မေးသည်။ မျက်စောင်းကလည်း တခဲခဲနှင့်။
“မင်းမလဲကွာ၊ မလုံမလဲနဲ့။ ခုပြောမှာက တခြားပါ။ ညက အိပ်မက် ကောင်းလို့ပါ။ ဒါမျိုး မမက်တာ ကြာပြီကွ”
“ဘာလဲ မြေလျှိုးမိုးပျံ နေပြန်ပြီလား။ ထီပေါက်ရအောင် ကလည်း ထိုးမထားဘူး။ ရာထူးတက်ဖို့ ကလည်း နှစ်ယောက်စလုံး ဂိတ်ဆုံးနေပြီ”
“ဟဲ ဟဲ ကံထမ်းလာတာ မမြင်ရဘူးတဲ့ကွ၊ မင်း ဘယ်မြင်နိုင်ပါ့မလဲ။ အသာနေစမ်းပါ။ ဒီတစ်ခါ မက်တာက ...”
ကိုအုန်းဌေးက အိပ်မက်အကြောင်း ရှင်းပြဖို့ အစပျိုးလိုက် သော်လည်း မိန်းမက အခြား အကြောင်းအရာတွေ ပြောနေသဖြင့် ဆက်ပြီး ပြောခွင့်မသာတော့။ သည်နေ့ စနေ ရုံးပိတ်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက် ဆိုတော့ နေ့လယ် သို့မဟုတ် ညနေ အခွင့်သာသည့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြောကို ပြောဦးမည်ဟု စိတ်ထဲက တေးထားလိုက်သည်။
တေးထားသော်လည်း အခွင့်မသာ။ နေ့လယ်မှာ အိမ်သူသက်သားသည် အကြီးမနှင့် အငယ်ကောင် လက်ဆွဲပြီး တစ်ရပ်ကွက်ကျော်က သူ့အမေအိမ်သို့ အလည်သွားလေ၏။
“မရောက်တာ ကြာပြီ၊ ကျောင်းပိတ်တုန်း သွားရတာ။ တစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ကောင်းကောင်း နေရစ်” တဲ့။
ကိုအုန်းဌေးလည်း သတင်းစာ ဟိုလှန်ဒီလှန်၊ တီဗွီလိုင်း ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်းနှင့် မျက်စိညောင်း၊ ခါးညောင်းလာတော့ ခြံထဲဆင်းခဲ့၏။ ခြံထဲ ဟိုလျှောက်၊ ဒီလျှောက်နှင့် ဝါးရုံပင်အောက် ရောက်လာသည်။ ဘာရယ်မဟုတ်၊ ဝါးရုံပင်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ...
“အလဲ့၊ ဝါးရုံပင် ထိပ်ဖျားမှာ စက္ကူစွန်လေး ပါလား၊ အငယ်ကောင် ကမြင်းထားတာ ထင်တယ်” အာမေဍိတ် ပြုရင်း ညက အိပ်မက်ကို ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်၏။
ကိုအုန်းဌေး ဘေးဘီကို အကဲခတ် လိုက်သည်။ ပြီး ဘာရယ်မဟုတ် စွန်နှင့် တည့်တည့်မှာ ခြေစုံရပ် လိုက်သည်။ စွန်ကို မျက်တောင် မခတ်စတမ်း စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့ ဆန့်တန်းထားပြီး ခြေနှစ်ဖက်ကို စုံကြွသည်ဆိုရုံ ခုန်လိုက်ရာ ငြိမ့်ခနဲ မြောက်တက် သွားလေ၏။ အရှိန် တစ်သမတ်တည်းဖြင့် စက္ကူစွန်ရှိရာ မြောက်တက်သွား၊ စွန်ကို လက်ဖြင့် အသာဖြတ်ယူ မြေပြင်သို့ ဖြည်းဖြည်းညင်သာ ပြန်ကျလာခဲ့၏။
ကိုအုန်းဌေး ဘေးဘီကို ပြူးပြူးပျာပျာ ကြည့်မိလေတော့၏။ သူ့ရင်တွေ တဒုန်းဒုန်း ခုန်နေသည်။ လက်ထဲက စွန်ကလေးပင် တဖျတ်ဖျတ် ခုန်နေ၏။ သည်တစ်ခါ အိပ်မက် မဟုတ်ဘူး။ ဒါ တကယ့် အဖြစ်အပျက် ပါပဲ။ မယုံနိုင်စရာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ မနေ့ညက အိပ်မက်သည် တကယ်ဖြစ်လာ နေပါလား။ အဖြစ်အပျက်က ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင် မယုံနိုင်စရာ ဆိုတော့ အခြားသူတွေကကော ပြောလျှင် ယုံကြပါ့မလား။ ကိုအုန်းဌေး ဦးခေါင်း ချာချာလည် နေစဉ် 'ဒုန်း' ဆို အိမ်ထဲက အသံကြီး ကြားလိုက်ရ၏။
“ဟာ တီဗွီကြီး၊ ကြောင်တိုက် ချလိုက်ပြီ ထင်တယ်”
ကိုအုန်းဌေး အိမ်ထဲသို့ ဒုန်းစိုင်းကာ အပြေးဝင် သွားလိုက်၏။ ကြောင်က ထွက်အပြေး ခလုတ်တိုက် လိုက်သေးသည်။ တော်သေးရဲ့။ တီဗွီက သူ့နေရာမှာသူ ရှိနေ၏။ ကြောင် သူ့ဟာသူ ခုန်ချတာကိုး။
ရင်တုန်ပန်းတုန်က မပျောက်သေး။ ရေတစ်ခွက် ပြေးသောက်ပြီး တီဗွီရှေ့က ဆက်တီမှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ခေါင်းကို နောက်လှန်ပြီး သတင်းစာဖြင့် ယပ်ခတ်ကာ အမောဖြေ နေရသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ နောက်ထပ် ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်စရာ ငှက်ဆိုးထိုးသံက ပေါ်လာလေ၏။
“ကိုအုန်းဌေး ကိုအုန်းဌေး လက်ကြီး ကိုအုန်းဌေးရေ့ အသက်မှ ရှိသေးရဲ့လား”
ဟာ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေ ပြန်လာပြီကိုး။ ခြံဝင်းတံခါးချက်ကို ပြေးဖွင့်ပေးရသည်။
“ရှင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် အိပ်ပျော် နေတာလား။ အံ့ပါရဲ့။ အော်ခေါ် နေရတာ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ကြားနေပြီ။ ရှင် မကြားဘူး”
"ကြားပါတယ်ကွာ၊ ကြားကြားချင်း ပြေးလာ ခဲ့တာပဲ”
“ကြားပါတယ်သာ ဆိုတယ်။ ကလေးတွေ အော်ခေါ်နေတာ အခွန်းတစ်ရာလောက် ရှိတော့မယ်။ ကျွန်မ မအော်ချင်ဘူးနော်၊ ကျောင်းမှာလည်း အော်ရ၊ အိမ်မှာလည်း အော်ရနဲ့ လည်ချောင်းကွဲ လိမ့်မယ်”
ကိုအုန်းဌေးလည်း စကားနည်းရန်စဲ စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းလိုက်၏။
“သားရေ သားလွှတ်ထားတဲ့ စွန်လေးလေ၊ ဝါးရုံပင်ထိပ်ဖျားမှာ တင်နေတာ။ ဖေကြီး ယူပေးထားတယ်”
“ဟာ သား မလွှတ်ပါဘူး။ သားမှ စွန် မချိုးတတ်တာ”
“ဟေ ... ဒါဆို တစ်ယောက်ယောက် လွှတ်တဲ့စွန် တို့ ဝါးရုံပင်မှာ လာတင်”
မိန်းမက မျက်စောင်းထိုးသဖြင့် ကိုအုန်းဌေး ပါးစပ်ပိတ်သွား၏။ သားအမိတစ်တွေ အိမ်ထဲ ဝင်သွားမှ ဝါးရုံပင်ဘက် အပြေးကလေး လျှောက်ခဲ့သည်။ ဟိုဟိုသည်သည် ကြည့်သော်လည်း စွန်ကိုမတွေ့။ ဗလာစာရွက် ချောချောဖြင့် လက်ရာ သေသပ်စွာ ချိုးထားသည့် စွန်ဖြူဖြူလေး၊ ဘယ်ရောက်သွား ပါလိမ့်။ လေတိုက်လို့ လွင့်သွားလည်း သည်နား တစ်ဝိုက်မှာပဲ ရှိရမည်။ တစ်ခြံလုံး လှည့်ပတ်ရှာလည်း မတွေ့တော့။ အိမ်ထဲများ ယူသွားမိခဲ့ လေသလား။
အိမ်ထဲ ပြေးရှာရပြန်၏။ တီဗွီနား တစ်ဝိုက်မှာ။ ဆက်တီတွေ ကြားမှာ၊ ရေအိုးစင် အနားမှာ။ စွန်ဆိုတာ ဝေး၊ စက္ကူတစ်စပင် မတွေ့ရ။
“ကိုအုန်းဌေး၊ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ဘာရှာနေတာတုံး။ တီဗွီလည်း ပွင့်လို့၊ သတင်းစာတွေက ဖရိုဖရဲ၊ ရှင် တီဗွီရှေ့ တစ်ချိန်လုံး အိပ်ပျော်နေတယ် ထင်တယ်”
“ဟာ ... လန့်လိုက်တာကွာ၊ မင်းကလည်း တိုးတိုးသက်သာ ပြောစမ်းပါ။ ကြာရင် ငါနှလုံးရောဂါ ရလိမ့်မယ်။ ရုံးက ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခု ပျောက်လို့ ရှာနေတာဟေ့”
ကိုအုန်းဌေး ရေတစ်ခွက် ပြေးသောက် ရပြန်၏။
ညအိပ်ရာထဲ ရောက်တော့လည်း တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်။ နေ့လယ်က အဖြစ်အပျက်သည် သူတစ်ပါးယုံဖို့ မပြောနှင့်။ သူကိုယ်တိုင်ပင် ကာယကံရှင် မို့သာ မယုံချင့် ယုံချင်နှင့် ယုံနေရ၏။ ဒါလည်း အိပ်မက်တစ်ခု မဖြစ်နိုင်ပေဘူးလား။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အိပ်မက်သည် ပုံစံတူ မက်ရိုးထုံးစံ မရှိ။ ပြီးတော့ အိပ်မက်ဆိုတာ အိပ်မှ မက်တာ။ တစ်နေ့လယ်လုံး သူ မအိပ်ခဲ့ဘူး မဟုတ်လား။ သူက အတွေးကွန်ချာဖြင့် ဘယ်လူးညာလှိမ့် အိပ်၍မပျော် ဖြစ်နေသော်လည်း ဒေါ်ငါးဖန်းမ ကတော့ တခူးခူး တခေါခေါဖြင့် အိပ်မောကျနေပြီ။
ကိုအုန်း အိပ်ရာက အသာလေး ထလိုက်၏။ အခန်းထောင့်ဆီ ခြေဖျားထောက်ပြီးသွား၊ လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်ထောင်။ ခြေနှစ်ဖက်ကို စုံကြွတယ်ဆိုရုံ ခုန်ကြည့် ပြန်ကော့လည်း၊ ခုန်မိသည့် အတိုင်းသာ။ နှစ်ခါ သုံးခါ မထူးခြားတော့၊ အိပ်ရာထဲ အသာ ဝင်ခွေရပြန်သည်။ လင်းခါနီးမှ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားသည်။ အိပ်မက်ထဲမှာလည်း မိုးမပျံပါ။
သည်နေ့လည်း တနင်္ဂနွေဆိုတော့ အိမ်မှာ နားရသည်။ သားအမိတစ်တွေက အတော် လမ်းသလားချင် ကြသည်။ မနေ့က အမေ့အိမ် သွား။ သည်နေ့တော့ အစ်မအိမ် သွားမတဲ့။ မနေ့က ချိန်းခဲ့လို့တဲ့။ သွား သွားကြပေါ့။
သူတို့လည်း ထွက်သွားရော ဝင်းတံခါးပိတ်ကာ ကိုအုန်းဌေး ခြံထဲ ပြေးဆင်း လာခဲ့သည်။ စက္ကူစွန်ကလေးကို ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် ခြံထဲ ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာ၏။ မတွေ့။ ဝါးရုံပင်ပေါ်များ ပြန်ရောက် နေမလား။ မော့ကြည့်တော့လည်း မတွေ့ပါ။
ကိုအုန်းဌေး ဝါးရုံပင် ထိပ်ဖျားကို စိတ်အာရုံ စုစည်းကာ စိုက်ကြည့်လိုက်၏ မနေ့က ပုံစံအတိုင်း လက်နှစ်ဖက် ဆန့်တန်းကာ ခုန်ပျံကြည့် လိုက်သည်။ တစ်ထွာထက် ပိုမကြွ။ အရွဲ့တိုက်ပြီး ခါးတောင်းကို မြှောင်အောင် ကျိုက်လိုက်၏။ မြေပြင်ကို မြင်းကန်သလို ကန်ပြီး ခုန်တက်လိုက်၏။ တစ်တောထက် ပိုမကြွ။ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ၊ သုံးခါအထိ ကြိုးစားကြည့်သည်။ ထူးမခြားနား။
သို့သော် ကိုအုန်းဌေး စိတ်ဓာတ် မကျပါ။ တစ်ကြိမ် အောင်မြင်ပြီးသား ကိုလည်း ချေဖျက် မပစ်နိုင်ပါ။ အိပ်မက်သည်ပင်လျှင် နှစ်တွေ၊ လတွေကြာမှ မက်ခွင့်ရသည် ဖြစ်ရာ အိပ်မက်မဟုတ်၊ တကယ့် အဖြစ်အပျက်သည် ထိုထက်မက၊ ကြားချင် ကြာပေမည်။ စိတ်ရှည်၊ သည်းခံ၊ ဇွဲသန်ဖို့သာ လိုရင်းဟု ကိုအုန်းဌေးက ခံယူထားလေသည်။
မြေကြီးမှ ပျံတက်နိုင်ခြင်းမှာ ဘယ်လို အကြောင်းတွေ ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ ကိုအုန်းဌေး တွေးကြည့်သည်။ မြေလျှိုးမိုးပျံ ဈာန်အဘိညာဉ် ဆိုတာက သမထ၊ ဝိပဿနာ အကြောင်းရင်းခံသည်။ သူနှင့် မဆိုင်။ တောင်ပံခတ်၍ ပျံရအောင်လည်း သူသည် ငှက်မဟုတ် ကိုယ်ဖော့စွမ်းအား ဆိုတာကလည်း ဝတ္ထုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာသာ ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်၊ ရှောင်လင် ဘုန်းကြီးတွေ မြေပြင်မှာပဲ မွေ့လျော် နေကြပြီ။
သည်လိုဆို သူ ဘာကြောင့် ပျံတက် နိုင်ရသနည်း။ စိတ်ဦးဆောင်မှု ထက်သန်လွန်း သဖြင့် ရုပ်က မလွန်ဆန်သာ ဖြစ်သွားတာလား။ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ ဆိုသည့် စကားလည်း ရှိထားလေတော့ စဉ်းစားစရာ ကောင်းသည်။ ပြင်ပ ပရတန်ခိုးရှင် တစ်ယောက်ယောက်က ဖေးမလိုက်တာကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
တစ်ခါ မြေကြီး၏ ဆွဲငင်အား ဆိုတာကလည်း ရှိပြန်သေး မြေဆွဲအားကြောင့်သာ သက်ရှိ သက်မဲ့ မှန်သမျှ မြေပေါ် မြဲနေကြပါသတဲ့။ သူ့တစ်ယောက်တည်း အပေါ် ကွက်၍ မြေဆွဲအား မဲ့သွားတာ မျိုးကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား တွေးရင်း တွေးရင်း ကိုအုန်းဌေး ခေါင်းချာချာလည် လေ၏။
လောကကြီးမှာ လက်တွေ့မဆန်။ သိပ္ပံနည်း မကျသည့် သဘာဝနယ်လွန် ဖြစ်ရပ်တွေ ဒုနဲ့ဒေး မဟုတ်ပါလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိဘက်က လုံ့လ ဝီရိယ စိုက်ထုတ်ကာသာ နေရမည်ဟု ကိုအုန်းဌေး ဆုံးဖြတ်ထား လေသည်။
ရုံး ရုံးမှာမို့၊ လမ်း လမ်းမှာမို့၊ အိမ် အိမ်မှာမို့၊ အခွင့်ကြုံလျှင် ကြုံသလို နေရာမရွေး ကိုအုန်းဌေးကြီး ခုန်ခုန် နေသည်ကို သတိထားမိသူ ရှိချင်မှ ရှိမည်။ ရှိချင်လည်း ရှိနေနိုင်သည်။
သူ့ သားတော်မောင် ကတော့ ...
“ဖေကြီး ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ လုပ်လုပ် မနေနဲ့ဗျာ” ဟု ပြောဖူးလေ၏။
(မြန်မာဝတ္ထုတို ၂၀၁၂ (၂၀၁၃))
#wafrica #esteem #story #smartphonephotography
3 years ago in #artzone by xinmee (40)
photocontests2 (44)3years ago
Server time: 17:37:03 Account Level: 0
Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!